Maxkamad mag ku xukuntey nin la nool caabuqa aydhis oo kufsi gaystey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Xeer ilaaliyaha maamulka Butlaan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in la xukumey nin la nool caabuqa keena aydhiska oo lagu haysto inuu kufsaday gabadh. Ninkan ayaa beeniyay inuu kufsaday gabadha ee iyadoo og ay la seexatay.
”Wax suuragal maaha in gabadh og nin la nool cudur wax weyn ka bedeli kara nolosheeda ay la seexan karto sidaas awgeed ninka lagu xukumey inuu bixiyo magta gabadha, labo kun oo doolar oo ganaax ah iyo in laba nin oo ehelkiisa ah ay dammaanad qaadaan inuusan waxba shukaansan, guursan si uusan shacabka ugu dhex faafin xanuunkaasi.
Waa kiiskii ugu horeeyay ee nin la nool caabuqa keena aydhiska ama in uu dhinto difaaca jidhku lagu helo kufsi. Waxa jira boqolaal la nool caabuqa oo si fudud ku faafin kara haddii aan laga digtoonaan, weliba dadka arooska galaya is tijaabin inta ayna aqal gelin.